Sweet Melody in the Rain: February 2009
- နိုင်ငံသားလေး ဖြစ်နေရုံနဲ့ 
- တို့ ချစ်တဲ့ နိုင်ငံကို တိုးတက်အောင်
လုပ်ပေးလို့ လား ....
- တို့ ချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေကို ပညာတတ်အောင်
စီမံပေးလို့ လား ...
- ပညာတတ်တဲ့ လူတွေကို ကော
ထိုက်တန်တဲ့ လစာပေးရဲ့ လား ....
- တို့ ချစ်တဲ့ ကလေးတွေကို မငတ်မွတ်အောင်
ကာကွယ်ပေးလို့ လား ....
- တကယ်လို့ များ ....
- ပြည်ပမှာ နေချင်မှာလဲ??
10% ဆိုတာကြီးကို ပေးနေရက်သားနဲ့ 
လေလှိုင်းထဲက အသံတွေနဲ့ ပဲ
Posted by Melody at 12:20 PM No comments:
- ရှေ့ ကိုကြည့်လိုက်ရင်
- ရှေ့ ကိုရောက်လို့ မှ
- ပြန်ကွေ့ ဖို့ သတ္တိလည်း ရှိရမယ်။
ပြန်ကွေ့ ချင်စိတ် ရှိဖို့ လည်းလိုတယ်။
နှစ်ဆ အကုန်ခံနိုင်တယ့် အချိန်လည်း ရှိရမယ်။
- ဒါကြောင့် ....
ရှေ့ ကိုသွားဖို့ မဆုံးဖြတ်ရသေးခင်
Posted by Melody at 5:00 PM No comments:
- မင်းပြောဖူးတဲ့ ချစ်စကား
ကိုယ့်ကို ... ချစ်မှချစ်ရဲ့ လား ???
မင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မဆင်နွဲချင်ဘူး။
နောက်ဆုံးတစ်နေ့ မှာ ...... ။
Posted by Melody at 5:04 PM3comments:
- မှန်ကို သိပ်မကြည့်ဖြစ်ဘူး။ (၀က်ခြံညှစ်တာက လွဲပြီးတော့၊ ခေါင်းဖြီးတာက လွဲပြီးတော့) မှန်ထဲက ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို ကိုယ်ကြည့်ပြီး မကြိုက်ဘူး။
ကြည့်လို့ မရဘူး။ (အလှပြင်ဖို့နေနေသာသာ) ဘာလိုနေမှန်းကို မသိ။
- သူများ ကိုယ့်ကို ကြည့်လည်းမကြိုက်ဘူး။ (ကိုယ်သတိထားမိလောက်အောင်ထိ စိုက်ကြည့်နေလျှင်) ကိုယ့်ထက် ကြီးကြီး၊ ငယ်ငယ် ဘယ်သူ့ ကိုမဆို အော်ပစ်လိုက် တာပဲ။ (ရိုင်းတယ်လို့ ပဲပြောပြော) ဘာကြည့်တာလဲ.... လို့ ။
- ဓါတ်ပုံရိုက်မလို့camera နဲ့ ချိန်နေပြီဆိုရင် ပိုဆိုးတယ်။ သက်တောင့်သက်သာကို မဖြစ်ဘူး။ ဒါကြောင့် များသောအားဖြင့် camera ကို ရှောင်တာများတယ်။ ဓါတ်ပုံကူးဖို့ကုန်ကျတဲ့စရိတ်လည်း သက်သာတာပေါ့။ (သေရင်တောင် ထောင်မယ့် ဓါတ်ပုံ ရှိမှ ရှိပါ့မလားတောင် မသိ)
- ရင်ခုန်တတ်စ အရွယ်တုန်းက ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဓါတ်ပုံ အတူတူ ရိုက်ဖူးတယ်။ (တမျိုးမထင်လိုက်ပါနဲ့ ) ဆရာမရိုက်ပေးတာပါ။ အဲဒီကောင်လေးက ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ ။
- ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ ချိန်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အရိုက်ခံမယ့် လူတွေက (တော်တော် လေးကို) ခြားနေတယ်။ အဲဒါကို ကောင်လေးက သိတော့ ကိုယ့်လက်ကို အသာကိုင်ပြီး အနားရောက်အောင် ဆွဲလိုက်တယ်။
- ဒီတော့ ဘယ်ရမလဲ။ မျက်စိမှိတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်လိုက်ရော။ ဆရာမကလည်း ရိုက်လိုက်ရော။ ကွက်တိပဲ။ အဟိ ... ။
- film ပဲကြည့်ရင်တော့ ကောင်လေးခမျာ တော်တော် ရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းလိမ့်မယ်။ (ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် နှစ်ယောက်တည်းတွဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ရတယ်ပေါ့။) ဓါတ်ပုံလည်း ကြည့်လိုက်ရော... feel လည်းအောက်ရော။
- အဲဒါကိုယ်တို့ တွေ အုပ်စုလိုက် ဘုရားဖူးသွားတုန်းကလေ။ အုပ်စုလိုက် ဓါတ်ပုံတွေ ထဲမှာလည်း ကိုယ့်ပုံမပါတော့ ကောင်လေးခမျာ ဆွေးရော။ (ဓါတ်ပုံရိုက်တော့မယ့် အချိန်တွေမှာ ကိုယ်က ဘယ်ကို ပျောက်သွားမှန်းမသိ ပျောက်သွားခဲ့တာလေ။ )
- ဒီလိုနဲ့တစတစ ကိုယ် camera ကိုရှောင်နေမှန်း သူသိလာခဲ့တယ်။ သူများတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်နေတဲ့အချိန် တရုတ်စံကားပင်အောက်မှာ ပန်းတွေ ကောက်နေတဲ့ ကိုယ့်ဆီ သူအရောက်လာခဲ့တယ်။ ပျော်လိုက်တာလေ။ (ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး)
- ခုတော့လည်း သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့သူငယ်ချင်းတွေလိုပါပဲ။ အတူတူ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတောင် ဘယ်နားရောက်နေလည်း မသိဘူး။ ရင်ဘတ်ထဲမှာပဲ တူပါရဲ့ ။
Posted by Melody at 5:06 PM No comments:
Labels: ရင်ခုန်သံ တပိုင်းတစ
Baby & Language
- Mummy က "ငှက်" ဆိုရင်
Baby က "Bird" တဲ့ ...။
- Mummy က "Aeroplane" ဆိုရင်
Baby က "လေယာဉ်ပျံ" တဲ့ .... ။
- Mummy က "ခေါင်းပတ်" ဆိုရင်
Baby က "ဘီးကုပ်" တဲ့ ....။
- Mummy က "orange" ဆိုရင်
Baby က "လိမ္မော်သီး" တဲ့ ....။
- Mummy က "ငှက်ပျောသီး" ဆိုရင်
Baby က "banana" တဲ့ .....။
- Mummy က "diaper" ဆိုရင်
Baby က "သေးထုပ်" တဲ့ ....။
- Mummy နှင့် Baby
Posted by Melody at 2:12 PM 1 comment:
- မနေ့ တုန်းက သမီးလေးရယ်၊ အမေရယ်၊ ကျွန်မရယ် ဈေးဝယ်ထွက်ကြတယ်။ အပြင်မသွားတာကြာလို့အပြင်ထွက်ရရင်ကိုပဲ သမီးလေးက အရမ်းပျော်။ ဒါတောင်နော် ... တပတ်တခါလောက်က အနည်းဆုံး ဈေးဝယ်ထွက်ဖြစ်တယ်။ အကျီအသစ်၊ skirt အသစ်
(သို့ မဟုတ်) ဘောင်းဘီအသစ် ဆင်ပေးလိုက်
လို့ ကတော့ သမီးလေးက ပျော်လိုက်တာ ပြောမနေ
- လမ်းမှာလည်း mummy, mummy နဲ့ ချွဲပြီးခေါ်၊ (စိတ်ကြည်ရင် "မေမေ" လို့ လည်း ခေါ်တယ်။) ပြီးရင် ချီခိုင်းတော့ တာပဲ။ "လမ်းလျှောက်ပါလား" လို့ ပြောရင်၊ "Mummy ကို ချစ်လို့ " ဆိုတာက လာသေးတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ အဲဒီတော့လည်း ချီပေါ့။ လမ်းတလျှောက်လုံး။
- သမီးလေး အသက်က ခုမှ (၂)နှစ်နဲ့ ရက်ပိုင်းပဲ စွန်းသေးတယ်။ သူ့ ကိုယ်သူ လူကြီးများ အောက်မေ့နေလားမသိ။ ပဲကတော့ အပြည့်နဲ့ ။ (အမေနဲ့ များ တခြားစီ ... :P) ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင် အိုက်တင်က ထုတ်ပြီးသားပဲ။ တစ်ပုံထဲရိုက်
လို့ မရဘူးနော်။ "နောက်တစ်ပုံ" လို့ ပြောပြီး သူကအိုက်တင် နောက်တစ်မျိုးနဲ့ ready ဖြစ်နေပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရိုက်ပေတော့ပဲ။
- သမီးလေးက Cinderalla တော့သိတယ်။ skirt နဲ့ ၊ shoe နဲ့ လေဆိုရင် Cinderalla မှန်းတန်းသိတော့တာပဲ။ (Mummy က Cinderalla ပုံပြင်ပြောပြရင် skirt နဲ့ ၊ shoe
နဲ့ ကကို မတက်တော့လို့ ။)
- ဈေးဝယ်ပြီးလို့ အိမ်ကိုအပြန် ရထားပေါ်မှာ သမီးလေးလေ ငြိမ်ငြိမ်ကို မနေဘူး။ နည်းမျိုးစုံပြောလည်း မရဘူး။ (ဟိုးမှာ ... ကားအများကြီး၊ ဆိုင်ကယ်အများကြီး ဆိုလည်းမရ။) ဘွားအေ လက်ထဲမှာ ခုန်နေတော့တာပဲ။ ယောင်္ကျားလေး ရှုံးလောက်တယ်။ ရထားပေါ်က လူတွေအကုန်လုံးလည်း ၀ိုင်းကြည့်။ ဘွားအေ လက်တွေကလည်းညောင်း။
- နောက်ဆုံးတော့လည်း ကြံရာမရတဲ့အဆုံး "သမီး သီချင်းဆို" လို့ ပြောလိုက်တယ်။ (idea ကလည်းထွက်တယ်။ ပေါက်တက်ကရ) သမီးကလည်း ခေသူမဟုတ်။ ဆိုတော့တာပဲ။ ခက်တာက သမီးလေးက ဘာသီချင်းမှ မရတာ။ (စကားတောင် ရေလည်အောင်ပြောတတ်တာမဟုတ်။) အဲဒါကို mummy ကသီချင်းဆိုတဲ့။
- လက်တစ်ဖက်ကို မိုက်လိုမျိုးလုပ်ပြီး ကိုယ်လေးလှုပ်ပြီး ဆိုပါလေရော။ ကြာတော့ ဘွားအေထက်မှာ ဆိုရတာ အားမရလို့အောက်ဆင်းပြီးဆို ။ cinderalla ... cinderalla ဆိုပြီးတော့ cinderalla ကို သီချင်းလုပ်ပြီးဆိုနေတာ။ ၀ါသနာက သိပ်မပါရှာဘူး။
Posted by Melody at 12:04 PM2comments:
Rebirth vs Creation
- Rebirth refers toaperson's mind taking one body after the other. Our body and our mind are separate entries: the body is matter and is made of atoms. The mind refers to all of our emotional and cognitive experiences, and is formless. When the body and mind are linked, we are alive, but at death, they separate. The body becomesacorpse, and the mind continues on to take another body.
Posted by Melody at 4:58 PM No comments:
Labels: I Wonder Why
- ဒီနေ့ ခွင့်ယူတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ခွင့်ယူလဲမမေးနဲ့ ။ ယူချင် လို့ ကို ယူတယ်။ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာ အကြောင်း ပြချက်ဆိုတာ မရှိဘူး။ မရှည်တဲ့စိတ်ကို တိုအောင်လာ မလုပ်နဲ့ ။ ကြည်လင်နေတဲ့စိတ်ကို နောက်အောင် လာလုပ် လို့ ကတော့ ရန်သူပဲ။ (ယောင်္ကျားလေးဆို ပိုဆိုးတယ်။)
- အလကား သူများကိစ္စ လာပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ ဘာမှလည်း မပတ်သတ်ဘဲနဲ့ ။ (ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောတာ ... အမှန်က စပ်စပ်စုစုလို့ သုံးချင်တာ။) သိသင့်တယ်ထင်ရင် ပြောမှာပေါ့။ လာပြီးတော့ မသုံးသပ်နဲ့ ။ မကြိုက်ဘူး။
(ဖိနပ်နဲ့ ကြေအောင် ဖိချင်တဲ့ လူတွေထဲမှာ ပါသွားလိမ့်မယ်။)
- ခရီးသွားဟန်လွဲ ကြုံဆုံတဲ့ လူတွေပဲ ဒီထက်ပိုပြီး မသိသင့်ဘူး။ မဝေဖန်သင့်ဘူး။
Posted by Melody at 12:11 PM 1 comment:
- ကောင်မလေးရယ် .. မင်းကို မင်းအမေက မမွေးခင်ကတည်းက တော်တော် ချစ်ရှာတာ။ အားလုံးကို မင်းနဲ့ အတူ ရင်ဆိုင်ဖို့သတ္တိတွေ အပြည့်နဲ့ လေ။
- ကောင်မလေးရယ် ... မင်းအသက်ကို ရန်မူမယ့်သူကို မင်းအမေက သူ့ အသက်နဲ့ လဲပြီး ကာကွယ်ပေးဖို့အသင့်ပဲလေ။
- ကောင်မလေးရယ် ... လောကကြီးကို မင်းနဲ့ အတူ နှစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့ ဆိုတာ လွယ်တာမှ မဟုတ်တာ။ ၀န်နဲ့ အားနဲ့ မမျှပေမယ့် မင်းအမေ အပြုံးမပျက်ဘဲ ရင်ဆိုင် နိုင်ခဲ့တယ်။
- ကောင်မလေးရယ် ... နေ့ စဉ်ရက်ဆက် အလုပ်လုပ်နေရပေမယ့် မင်းအတွက် အချိန် ဆိုတာ သက်သက်ရှိနေခဲ့တာ သတိရစမ်းပါ။
- ကောင်မလေးရယ် ... နည်းပညာတွေ ဘယ်လောက် တိုးတက်၊ တိုးတက် မင်းအမေ ကတော့ မင်းကို "O" လုံး ကလေးရေးဖို့သင်နေအုံးမှာပဲ။ လုံချည် ဘယ်လို ၀တ်ရလဲ သင်နေအုံးမှာပဲ။ ထုပ်ဆီးထိုးတမ်း ဘယ်လို ကစားရလဲ သင်နေအုံးမှာပဲ။ မင်းကို မြန်မာ ပီသစေချင်လွန်းလို့ ပါ။
- ကောင်မလေးရယ် ... စိတ်ညစ်စရာတွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ မင်းအမေလိုပဲ တစ်ချက် လောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြုံးပြစမ်းပါ။
- ကောင်မလေးရယ် ... မင်းအမေက မင်းကို မတောင့်မတနဲ့ဘ၀ကို ရောင့်ရောင့်ရဲရဲ ဖြတ်သန်းစေချင်သူပါ။ ဘာလို့ လောဘတွေကြီးနေရမှာလဲ? ဘာလို့ သောကတွေ များနေရမှာလဲ?
- ကောင်မလေးရယ် ... ဘ၀ကို အစက ပြန်စရမယ်ဆိုရင်တောင် မင်းအမေက မင်းကို လိုချင်ခဲ့သူပါ။ မင်းအမေ အသက်ကြီးလို့ အနားယူချိန်မှာ မင်းကဘာလို့ မပြုစုနိုင်ရမှာလဲ။ မင်းကဘာလို့မလုပ်ကျွေးနိုင်ရမှာလဲ။ မင်းအမေသေတော့မှ မင်းမပြုစုလိုက်ရလို့ငိုနေမယ်ဆိုရင်လည်း အပိုပဲလေ။
- ကောင်မလေးရယ် .... အစားအသောက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲဈေးကြီးကြီး မင်းစားရင်ပဲ မင်းအမေ ကျေနပ်တာ၊ အ၀တ်အစားတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးကြီးကြီး မင်းကိုယ်ပေါ်မှာ လှနေရင်ပဲ မင်းအမေ ကျေနပ်တာ မင်းသိရဲ့ လား? ပြီးတော့ ... ပြောသေးတယ်။ ပိုက်ဆံဆိုတာ ဘယ်အချိန်ရှာရှာ ရှာလို့ ရတယ်တဲ့။
- ကောင်မလေးရယ် ... တခါတလေ မင်းအမေ မင်းကို ဆူတာ၊ ငေါက်တာ ... မင်းကိုမချစ်လို့ မှ မဟုတ်ဘဲ။ မင်းကို လိမ္မာစေချင်လွန်းလို့ ။ မင်းကို တော်စေချင်လွန်း လို့ ။ မင်းကို ထူးချွန်စေချင်လွန်းလို့ ။ ပြီးတော့ .... မင်းကို သူ့ လို မဖြစ်စေချင်လို့ ။
- ကောင်မလေးရယ် ... ညည မင်းနို့ ဆာရင် (ဒါမှမဟုတ်) မင်းနေမကောင်းရင် အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး မင်းအမေ ပြုစုခဲ့တာတွေဟာ မင်းဆီက တစုံတခု မျှော်ကိုးလို့ မှ မဟုတ်တာ။
- ကောင်မလေးရယ် .............................................................
- ဒါတွေအားလုံးဟာ မင်းအမေက မင်းကို ချစ်လို့ ပါ။ ဒီကမ္ဘာမှာ မင်းအမေလောက် မင်းကို ချစ်မယ့်လူ မရှိသေးဘူး။ အလိုရှိရင် တမ်းတလိုက်စမ်းပါ။ မင်းအနား ချက်ချင်း ရောက်လာမှာ။ အမေ့ရင်ခွင်သာ မင်းအတွက် အလုံခြုံဆုံးနေရာ။
Posted by Melody at 12:55 PM3comments:
- မနေ့့တုန်းက သူငယ်ချင်း (၁) ယောက်ရဲ့သမီးမွေးနေ့ လုပ်တယ်။ သူ့ သမီးလေးက ချစ်စရာလေး။ သူ့ သမီးလေးကို တွေ့ တိုင်း
ကိုယ့်ရဲ့ သမီးလေးကို သတိရတယ်။
- သမီးက (၃) နှစ်၊ သားက (၁)နှစ်ရှိပြီ။ နီနီရဲရဲ ချစ်စရာလေးတွေ။ တော်လည်းတော်၊ လိမ်လည်းလိမ္မာ၊ သွက်လည်းသွက်တဲ့ ကလေးလေးတွေ။
- သားသမီးကပဲ ကံခေတာလား? အမေကိုယ်တိုင်ကပဲ ကံခေတာလားမသိ။ ခုတော့ အမေက တစ်နိုင်ငံ၊ သားသမီးက တစ်နိုင်ငံ။
(မမေလေးနေရာတွင် ခံစားရေးဖွဲ့ သည်။)
Posted by Melody at 1:52 PM 1 comment: